Ny lakilen'ny fisafidianana fonosana duvet | Bezzia
Maria vazquez | 14/09/2021 12:00 | an-trano
Efa nanome ny kapoka farany nataony ve ny Nordic taloha anao ary tsy mendrika intsony ny mandefa azy any amin'ny fanasan-damba indray? Manana efitrano vaovao ve ianao ary te-hanolo ny lambam-pandrianao amin'ny famenoana Nordic? Raha mbola tsy niatrika ny mividy duvet, mila lakile vitsivitsy ianao hahafantarana ny fomba hisafidianana ilay mety indrindra.
Betsaka ny azo atao raha ny amin'ny fividianana Nordic. Ahoana no hahalalana amin'izay, izay no safidy tsara indrindra? Ao Bezzia androany dia manandrana mitari-dàlana anao amin'ity fizotran'ny fividianana ity izahay, amin'ny antsipiriany momba izay tokony hojerenao, inona izay tokony ho ao an-tsainao hividy tsara.
1 Famenoana voajanahary na sentetika?
1.1 Mpameno voajanahary
1.2 Mpameno sentetika
2 Ny confection
Famenoana voajanahary na sentetika?
Ny fitaovana famenoana dia singa iray mamaritra mahazoa hery insulateur sahaza. Misy mpameno voajanahary sy mpameno sentetika an'ny kofehy mahazatra, ny kofehy polyester hollow na ny microfibers. Ny fahalalana ny mahatsara sy maharatsy ny fitaovana tsirairay dia hanampy anao handray ny fanapahan-kevitra voalohany.
Rehefa miresaka momba ny famenoana voajanahary isika dia miresaka volom-borona na midina. Famenoana volo Ampidirin'izy ireo ilay tehina izay mahatonga azy ireo ho mavesatra kokoa, tsy dia mahafinaritra loatra ny mikasika azy ireo ary manome azy ireo fahaiza-manao insulation thermal raha oharina amin'ny ambany.
Feno famenoana maivana izy ireo ary manana ny kalitao tsara azo ampiasaina. Arakaraka ny maha lehibe ny ambany ampiasaina amin'ny famenoana, ny habetsaky ny efitranon'ny rivotra dia noforonina, izay ahafahan'ny fivezivezena tsara kokoa ary noho izany ny fizarana hafanana sy ny etona haingana kokoa amin'ny hamandoana.
Raha te hahalala ny karazan'ilay ambany ampiasaina dia tokony hitari-dalana antsika a refy mahazatra fantatra amin'ny anarana hoe Fill Power. Izany dia manondro ny habetsaky ny pejy 28,35 g. ambany amin'ny fepetra mahazatra. Fomba iray, noho izany, handrefesana ny kalitaony. Ny famenoana Nordic tsara indrindra eny an-tsena dia mety manodidina ny Fill Power an'ny 9 na 10, amin'ny ambaratonga 10.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny fikajiana ny famenoana voajanahary dia miharihary, noho izany ny safidy lafo indrindra eny an-tsena. Ny iray hafa nefa mety hanakivy antsika koa amin'ny filokana amin'ity karazana mpameno ity: ny zava-misy izay tsy maintsy hataontsika mankanesa any amin'ny mpanadio maina hanadio azy ireo.
Izy ireo dia azo vita amin'ny kofehy mahazatra, kofehy polyester poaka na microfibers. Amin'ny fofonaina rehetra, sorohana ny fielezan'ny holatra ary hypoallergenic. Ny famenoana microfiber dia ireo izay maka tahaka tsara indrindra ny natiora voajanahary, na amin'ny habetsahana na amin'ny hery insulate. Na izany aza, tokony ho fantatrao fa noho ny fahombiazan'ny hafanana sy ny insulation thermal, ny famenoana synthetic dia mavesatra kokoa noho ny ambany hatrany.
Anisan'ireo tombony lehibe azo avy amin'ny mpameno sentetika ny ny vidiny, mora kokoa noho ny duvets midina. Ny tombony iray hafa dia ny fanamorana ny fanasana; ka io no lasa safidy malaza indrindra ao amin'ny efitranon'ny ankizy sy / na trano faharoa.
Ny fananganana efitranon-drivotra ao anaty duvet no lakilen'ny fanatsarana ny fahaizany mifehy. Nozaraina ara-dalàna ny famenoana manerana ny duvet no zava-dehibe amin'ny vokatra misy kalitao. Ny fanamboarana modely vita amin'ny diamondra dia mifanaraka tsara indrindra amin'izany tanjona izany. Ny duvet vita amin'ny landihazo 100%, izay mamela ny famenoana miaina, miaraka amina fananganana miendrika diamondra, noho izany no safidy tsara indrindra.
"Milanja grama ny taratasy isaky ny metatra toradroa" Toy izao ny RAE mamaritra ny fitsipi-pitenenana, teny iray izay refy hafanan'ny duvet. Ny avo ny grammage, ny avo ny hafanana. Raha hisafidy ny mety indrindra dia ilaina ny manisy fiheverana ny maripana manodidina ny efitranontsika sy ny hafanan'ny vatantsika.
Isaky ny miresaka trano mafana isika izay tsy midina ambanin'ny 180ºC ny maripana, a fitsipi-pitenenana manodidina ny 200g / m2 mety ho ampy handrakofana izay ilaintsika izany. Amin'ny toerana mangatsiaka be izay tsy mihoatra ny 15ºC, na izany aza, mety ilaina ny duvet miaraka amin'ny lanjan'ny 400g / m2.
Mazava kokoa ve ianao izao momba ireo andinin-tsoratra tokony hojerenao hahitanao ny délvet mety indrindra?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Ny lakilen'ny fisafidianana duvet
Cookies misy sôkôla mainty, matsiro!